होटल सिग्नेटमा किशोरी बलात्कृत, दुई पक्राउ – Sadarline
१७ पुस, नेपालगन्ज : नेपालगन्जको सुर्खेतरोडमा रहेको होटल सिग्नेटको कोठा नं. ३०५ मा बसेकी एक १९ वर्षिया युवती आईतबार बिहान २ बजे बलत्कृत भएकी छन् ।
पीडित युवती माथि सोही होटलको कोठा नं. ३०१ मा बस्दै आएका सुर्खेतका ४३ वर्षिय निरज गुरुङ्गले बलात्कार गरेको आरोप छ । बाँके प्रहरीले सो घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा आरोपी गुरुङ्ग र उनका सहयोगीको रुपमा रहेका कोठा नं.३२१ का मनोज गिरी भारतीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुंसन्धान अघि बढाएको छ ।
बलात्कारको सहयोगीको रुपमा पक्राउ परेका मनोज सिता एयर नेपालगन्जको स्टेशन म्यानेजर समेत हुन । सो होटलमा मनोज लामो समयदेखि प्रेमिका फेर्दै बस्दै आएको होटल निकट स्रोतले जनाएको छ । बलात्कारको आरोपी गुरुङ्गलाई मनोजले नै नयाँ वर्ष मनाउनको लागि सुर्खेतबाट नेपालगन्ज बोलाएको जानकारीमा आएको छ ।
प्रहरीले घटनाको जानकारी पाउने वित्तिकै घटनास्थलबाटै पीडित किशोरीसहित २ युवती उद्दार गर्नुको साथै पीडक गुरुङ्ग र मनोजलाई नियन्त्रणमा लिएर मेडिकल जाँच गराई अदालतबाट म्याद थपगरी अनुसंन्धान अघि बढाएको जानएको छ । प्रहरीले अनुसंधानको लागि सो समयका सिफ्ट म्यानेजर कपिल रञ्जुलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका निमित्ति प्रमुख तथा प्रहरी नायव उपरीक्षक राजेन्द्र अर्यालले घटनाको बारेमा थप अनुसंन्धान भई रहेको बताए । उनले भने–‘ नयाँ वर्षमा रमाईलो गर्नको लागि मनोजले नै गुरुङ्गलाई बोलाएको पाईयो । गुरुङ्ग र अर्की युवती कोठा न. ३०१ मा बसेको, मनोज ३२१ मा र पीडित ३०५ नं. कोठामा बसेको अवस्थामा राती २ बजे घटना भएको जानकारी आउने वित्तिकै प्रहरीले एक्सन लिएको हो ।’ उनले पीडित र पीडकको मेडिकल रिपोर्टको पर्खाईमा रहेको बताए ।
सदरलाइनडटकम १७ पुस, नेपालगन्ज : नेपालगन्जमा आगमी पुस २५ गतेदेखि २७ गतेसम्म एचसिआरसी कप व्याडमिन्टन प्रतियोगिता बाँकेमा हुने भएको छ । आयोजकका तर्फबाट सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै डा.कुमार शान शाहले स्वास्थ्य सेवासंगै सकारात्मक सामाजिक विकासको लागि खेलकुदको क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ प्रत्येक वर्ष व्याडमिन्ट प्रतियोगिता आयोजना गरिने जानकारी […]